Ku rakib aqalka lagu koriyo guriga oo ka faa'iidayso jiilaalka | Bezzia
Maria vazquez | 13/09/2021 20:00 | Qurxinta
Ma jeclaan lahayd beer yar? Inaad karti u leedahay inaad ka soo saarto abuurkaaga cuntadaada? Wali miyaad ku raaxaysanaysaa beerta xilliga jiilaalka? Guriga lagu koriyo ee guriga ayaa ah xalka si aad uga ilaaliso dhirtaada iyo ubaxaaga aadka u jilicsan qabowga daran, roobka ama barafka jiilaalka.
Hadda jiilaalkii ayaa soo socda Ku rakib aqalka lagu koriyo guriga! Waxay kuu oggolaan doontaa inaad sii waddo ku -raaxaysashada beerista iyo beerista xilligan sannadka, iyo sidoo kale inay ku siiso meel aad ku nasato. Ku sharadad noocyo aad u soo jiidasho leh oo waara sida koriinnada dhalooyinka ama ku samee aqalkaaga lagu koriyo alaabo jaban.
1 Faa'iidooyinka guriga lagu koriyo
2 Noocyada lagu koriyo
2.1 Of galaas
2.2 Of caag ah
2.3 Cabbir yar
Faa'iidooyinka guriga lagu koriyo
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ah in aqalka lagu koriyo aqalka, laakiin qabowgu waa meesha aan ku nool nahay. Aynu ssii wad shaqada beertayada ama dhirtayada jiilaalka, kuwaas oo ka ilaalinaya dhaxanta. Taasi malaha waa faa'idada ugu weyn laakiin ma aha midda kaliya.
Waa cunsur qurxin iyo qurxin aad u soo jiidasho leh. Curiye ka dhigi kara beerteenna mid soo jiidasho leh.
Waa meesha ugu habboon ee ilaali dhirta ugu jilicsan xilliga jiilaalka si aad ugu sii raaxaysato bannaanka guga.
Aad bay waxtar u leedahay marka la beerto khudaartayada xilliga qabow ee sannadka. Waxay noo oggolaanaysaa inaan kordhino wax -soo -saarka iyo damaanad qaadaya guusha gooyn iyo geedo.
Waxay na siisaa meel bannaan ka beero noocyada cimilada diiran iyo kulaylaha
Waxay kaloo noqon kartaa a meel ku habboon dibadda guriga oo heerkulkiisu wanaagsan yahay waqtiyada qabow ee sannadka. Waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad saartid miiska dhinaceeda yar iyo kursi -gacmeedka.
Noocyada lagu koriyo
Shaqada aqalka dhirta lagu koriyo waa abuuraan jawi la koontaroolay (microclimate) in ay ilaaliso xaaladaha ugu wanaagsan ee kulaylka, qoyaanka iyo iftiinka si dhirta iyo ubaxu u koraan caafimaad iyo in laga ilaaliyo cimilada xun. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan aqalka dhirta lagu koriyo ee ku yaal suuqa si isku mid ah uma fuliyaan hawshan, marka waa muhiim inaad isweydiiso dhowr su’aalood ka hor intaadan bilaabin inaad mid iibsato.
Maxaad u isticmaali doontaa aqalka dhirta lagu koriyo? Tani waa su'aasha ugu horreysa ee ay tahay inaad isweydiiso haddii aad go'aansatay inaad beerta ka dhigto aqalka dhirta lagu koriyo. Dhammaan guryaha lagu koriyo oo dhan ma bixiyaan jawi wanaagsan oo loo isticmaalo aagga nasashada. Dhammaantood laguma sameeyo agab isku mid ah, oo saameeya tayada iyo dabcan, miisaaniyadda lagama maarmaanka u ah in la helo mid.
Waxaa jira noocyo badan oo lagu koriyo, iyadoo ku xiran maaddada, cabbirka, naqshadeynta ... Maanta ujeeddadayadu waa inaan ku tusno burushyada yaryar ee qaarkood, kuwa ugu caansan, si ugu yaraan aad u caddaato meesha aad ka bilaabi lahayd raadinta.
Goobaha lagu koriyo dhalooyinka waxay leeyihiin bilicsanaan aad u taxaddar leh iyo bixi dahaarka ugu fiican. Iyaguna waa kuwa ugu qaalisan. Muraayadu waxay bixisaa iftiinka lagama maarmaanka u ah koritaanka dhirta iyo aragti dhammaystiran oo nadiif ah gudaha ilaa dibedda iyo dhanka kale.
Iyagu waa xulashada ugu wanaagsan ee bannaanka u ah kuwa aadka u baahida badan, laakiin sidoo kale ugu habboon abuurista goobo nasasho oo dibadeed. Markay timaaddo abuurista fidinta daboolsan ee guriga beerta ku yaal, waa kuwa ugu badan ee la dalbado. Aad u raagaya waxay yihiin ikhtiyaar aad uga sii waara kuwa ka samaysan alaabta caagga ah.
Of caag ah
Waxaa jira naqshado aad u kala duwan oo ka mid ah aqalka lagu koriyo oo leh dabool caag ah. Qalabka saxanka sida polycarbonate ama polymethacrylate, waxay siiyaan aqalka dhirta lagu koriyo oo leh adkaysi aan lagu gaari karin filimka ama qalabka filimka sida polyetylen (PE) ama chlorvin polyvinyl (PVC).
Maaha kuwo soo jiidasho leh sida kuwa dhalooyinka oo kale inkastoo, kuwa taarikada lagu sameeyo aysan aad uga fogayn kuwaan oo ay ka jaban yihiin. Intaa waxaa dheer, waxay yihiin agabyo ay fududahay in lagu shaqeeyo, markaa adigu inaad tahay gacan -yare yar waxaad dhisi kartaa aqalkaaga lagu koriyo isticmaalka alwaaxda iyo taarikada polycarbonate. Shabakadda, waxaad sidoo kale ka heli doontaa wax walba qorshayaasha ilaa casharrada si aad u ogaato sida loo sameeyo.
Labadaba hal shay iyo kuwa kaleba waa suurtogal in la helo, marka lagu daro, koriyo yaryar sida kuwa sawirrada lagu muujiyey. Haddii aad rabto kaliya meel aad ku ilaaliso dhirtaada xilliga jiilaalka, si aad awood ugu yeelatid inaad abuurto sariir yar ama aad beerto khudaar yar, tani waa xalka ugu habboon. Shakhsi ahaan, waan jeclahay ikhtiyaarrada ku lifaaqan wejiga, ma qabtaa?
Raadi mid meel wanaagsan oo lagu koriyo, Iyadoo aan lahayn hadhyo waaweyn oo geedo ama dhismeyaal ah si ay u hesho ugu yaraan 6 saacadood oo qorrax ah maalintii, si fiican u cabbir meesha oo ku rakib aqalka dhirta lagu koriyo- Wax badan ayaad ka heli doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Ku rakib aqalka lagu koriyo guriga oo ka faa'iidayso jiilaalka
Casual, leh jiinis iyo kabo